FutureLink, Author at Future Link - Page2of 2
Future Link International Education Provider USD 10,000 Study Award Application.
By FutureLink | July 21, 2017 | 0
လျှောက်ထားသူသည် အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အတွင်းရှိရမည်ဖြစ်ပြီး 2017~2018 ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံတကာသို့ သွားရောက်ပညာသင်ယူမည့်သူဖြစ်ရပါမည်။ Study Award လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ကျောင်းတက်ရောက်ခြင်းအတွက် မိဘနှစ်ပါးစလုံးမှ သဘောတူသူဖြစ်ရပါမည်။ Study Award USD 10000 ကို ကျောင်းလခအဖြစ်သာ ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အငြင်းပွားဖွယ်များဖြစ်ပေါ်လာပါက Future Link’s examination board ၏ အဆုံးအဖြတ်သာ အတည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါ Link တွင် ၀င်ရောက်၍ စာရင်းသွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ https://goo.gl/forms/EZ6QjeAPKbO0JIbF3
USD 10000 Study Award Program
By FutureLink | June 27, 2017 | 3
FUTURE Link မှ ပညာသင်ဆု ဒေါ်လာတစ်သောင်း လျှောက်ထားရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ – လျှောက်ထားသူသည် အသက် (၁၅)နှစ်မှ (၂၄)နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ – မည်သည့် နိုင်ငံ၊ မည်သည့် တက္ကသိုလ်၊ မည်သည့် ဘာသာရပ်ကိုမဆို ရွေးချယ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ – လျှောက်ထားသူသည် မိမိတက်ရောက်လိုသော တက္ကသိုလ် ဘာသာရပ်တစ်ခုတည်းကို ဦးတည်လျှောက်ထားရပါမည်။ – အခြေခံပညာကိုးတန်းအောင်မြင်သူများ၊ အခြေခံပညာဆယ်တန်းအောင်မြင်သူများ၊ တရုတ်ကျောင်း ကိုးတန်း၊ဆယ်တန်း၊ဆယ့်နှစ်တန်းအောင်မြင်သူများ၊ International School Grade 10, Secondary III အောင်မြင်သူများ၊ အခြား Diploma, Certificate ကိုင်ဆောင်ထားသူများ အားလုံးလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ – အမှတ်ကန့်သတ်ချက်နှင့် အခြားအရည်အချင်းကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။ – မိမိပညာအရည်အချင်းနှင့် မည်သည့်နိုင်ငံမည်သည့် တက္ကသိုလ် (သို့) ကျောင်းများသို့တက်ရောက်ခွင့် ရရှိနိုင်မည်ကို ဖောင်ဖွင့်ရက်မတိုင်မှီ…
TMC Academy ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ၁၉၈၁ ခုနှစ်ကတည်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဒီပလိုမာမှ စတင်ရဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများအထိအရည်အသွေးပြည့်မီစွာသင်ကြားပေးနေသောကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးဘာသာရပ်များ(Business Management)၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ(Hospitality and Tourism Management)၊ အိုင်တီဘာသာရပ်များ(Information Technology)၊ Mass Communication၊ ကျောင်းသားများအတွက် အဓိကလိုအပ်သောအင်္ဂလိပ်စာ၊ “O” level စသည့်ဘာသာရပ်များစုံလင်စွာတက်ရောက်နိုင်သည့်အပြင် ထူးခြားသည့်ဘာသာရပ်များဖြစ်သည့် ဥပဒေ (Law) နှင့် စိတ်ပညာ(Pshchology)ဘာသာရပ်များကိုလည်းတက်ရောက်သင်ယူနိုင်ပါသည်။ TMC Academy သည်4years EduTrustရရှိထားသောကျောင်းဖြစ်သည့်အတွက် ကျောင်းသားများအတွက် အာမခံချက် အပြည့်အ၀ပေးနိုင်သော ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်သည်။ Campus (Bishan Campus & City Campus) နှစ်ခုရှိပြီး ခေတ်မီကျယ်ဝန်းသော သင်တန်းခန်းမများရှိခြင်း၊ ကွန်ပျူတာနှင့် အခြားသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ Communication Studio များ ပြည့်စုံစွာထားရှိပေးခြင်း၊ကျောင်းသားများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်စာကြည်တိုက် (Library)၊ ကျောင်းသားများအတွက်…
SAA ဟာ စင်ကာပူမှာ CPA လက်မှတ်ရရှိလိုသူတိုင်း တက်ကြရတဲ့ National body တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Institutes of Singapore Chartered Accountants (ISCA) က ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်… ကျောင်းရဲ့ Main campus က CPA House မှာဖြစ်ပြီး city campus ကတော့ စင်ကာပူရဲ့ နာမည်ကျော် orchard မှာရှိပါတယ် …. အခုခေတ်မှာ အရေးပါလာတဲ့ Banking & Finance ဘာသာရပ် Business ဘာသာရပ် အထူးသဖြင့် Accounting ဘာသာရပ်တွေမှာ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ ကျောင်းဖြစ်ပါတယ် … ကျောင်းရဲ့ Deputy Regional Manager – Mr. Johnny Feng ကိုယ်တိုင်…
Special Thanks to Jasmine & MDIS
လေ့လာရေးလာရောက်ကြတဲ့ ကျောင်းသား/သူတွေကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ရတဲ့ Workshop တွေ အများဆုံးနဲ့အတူ ကြိုဆိုခဲ့တာကတော့ MDIS ပဲဖြစ်ပါတယ် … – ကျယ်ဝန်းတဲ့ ကျောင်း campus ရှိခြင်း – ဆေးပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ကွန်ပျူတာ၊ စီးပွားရေး၊ မီဒီယာ အစရှိသဖြင့် ဘာသာရပ်များအားလုံး စုံလင်စွာ သင်ကြားပေးနိုင်ခြင်း – အမေရိကန်နိုင်ငံကို ကျောင်းသားတွေ exchange သွားရောက်နိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေရှိခြင်းတို့အပြင် MDIS ရဲ့ ထူးခြားထင်ရှားတဲ့ အားသာချက်တစ်ခုကတော့ ကျောင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အဆောင်ရှိခြင်းပါပဲ …. ခေတ်မှီလုံခြုံပြီး လှပတဲ့ ကျောင်းသားဆောင်ဟာ ကျောင်း Campus ထဲမှာပဲ ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ် …. အဆောင်အောက်ကို ဆင်းလိုက်တာနဲ့ တရုတ်စာ၊ မြန်မာစာ၊ ဥရောပစာ၊ မလေးစာ၊…
စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ သက်တမ်းရင့်ကျောင်းတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ PSB Academy ကို သွားရောက်လေ့လာကြတဲ့အခါ PSB ရဲ့ Country Manager Ms.Yuki နဲ့အတူ Engineering Head ဖြစ်တဲ့ Dr. Arezki Slaouti က နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုကြပါတယ် …. PSB ဟာလည်း စင်ကာပူထိပ်တန်း ကျောင်းတကျောင်းဖြစ်တဲ့အပြင် edutrust4years အစောဆုံးရရှိတဲ့ ကျောင်းတွေထဲက တစ်ခုပါ …. PSB Academy မှာ -Engineering – Business – IT -Hospitality & Tourism စတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို တက်ရောက်နိုင်တဲ့အပြင် ၂၀၁၅ က စပြီး ဆေးပညာ ဘာသာရပ်တွေမှာ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေကို စတင်လက်ခံသင်ကြားပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်…
By FutureLink | June 21, 2017
IT ဘာသာရပ်မှာ နာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားတဲ့ TMC Academy ကို လေ့လာရေးသွားခဲ့ကြပါတယ် … Bishan မှာရှိတဲ့ Main Campus အပြင် မြို့လယ်မှာ city campus ရှိပြီး Edutrust4years ရထားတဲ့ TMC မှာ နောက်ထပ် ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုက LAW ဥပဒေ ဘာသာရပ်ပါ …. အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် University of London က တိုက်ရိုက်ပေးအပ်ချီးမြှင့်တဲ့ ဘွဲ့ကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး အနာဂတ်အတွက် ခိုင်မာကောင်းမွန်တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်အကိုင်ရရှိမဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် … နောက်တစ်ခုကတော့ Hospitality & Tourism ဘာသာရပ်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးနှစ်ကို ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာ သွားရောက်သင်ယူရပါမယ် ……
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Auston Institute of Management တွင် Diploma in Construction Project Management သင်တန်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးကို စိတ်ဝင်စားသောကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် တက်ရောက် သင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလ (၈) လတက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးပါက အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ University of the West of England ( Bristol ) ၏ Bsc (Hons ) in Construction Project Management ကို ဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းကာလ (၈) လတက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးပါက အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ University of the West of England ( Bristol…
By FutureLink | May 10, 2016 | 0
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် ဈေးကွက်စီးပွားရေး၏ ဆက်နွယ်မှုများ၊ ကွဲပြားခြားနားချက်များနှင့် အကျိုး သက်ရောက်မှုများ၊ ဈေးကွက်အတွင်း ပြိုင်ဆိုင်မှုများ အစရှိသဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် မတူညီသော ဈေးကွက်များအကြား ရပ်တည်မှုများနှင့်ပက်သက်ပြီး ကျောင်းသားများ နားလည်စေရန်လိုအပ်သော အခြေခံများ သင်ကြားပေးသောဘာသာရပ် • Politics inaChanging World လက်ရှိ နိုင်ငံတကာတွင် ဖြစ်ပွားနေသော နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုများ၊ အဓိကပြဿနာများ၊ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးတို့ အပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို နားလည်သဘောပေါက် စေရန်သင်ကြားပေးသော ဘာသာရပ် • Quantitative Methods for Business and Economics စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော တွက်ချက်မှုများ၊ လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသော ဘာသာရပ် အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက : ~~…